Ifulethi leholide "Igoose yegolide"
Le ndlu, kumgangatho ophezulu wendlu ephindwe kabini, ibekwe kwihlomela ledolophu iNeubrandenburg kwaye inikezela nge77m² indawo eyaneleyo ukuya kuthi ga kubantu abahlanu. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kunye nokufumanisa ubuhle baseMecklenburg-Vorpommern.
Indlu enefenitshala enencasa inegumbi lokuhlala elipholileyo, eliqaqambileyo, kunye namagumbi okulala amabini (enye ngqo phantsi kophahla) aneebhedi ezitofotofo, ezisanda kwenziwa kabini (1.80 x 2.00 m). Ukuba i-nessesary kukho ibhedi yesofa (1.60 x 2.00 m) kwigumbi lokuhlala kumntu owongezelelweyo.
Ekhitshini kukho yonke into oyifunayo kwaye ungasebenzisa zonke izibonelelo kwaye usebenzise ikofu, iti kunye nezithako ezisisiseko zokupheka.
Igumbi lokuhlambela lineshawa kunye nebhafu ngokunjalo. Ngokuqinisekileyo ndibonelela ngeetawuli zokusetyenziswa kwakho (1x ngokuhlala, ngokuhlala ixesha elide sinokulungiselela utshintsho olongezelelweyo lwelinen)
Le ndlu ixhotyiswe ngeTV ene-DVD player kunye neenkqubo zomculo, isomisi seenwele, intsimbi kunye nebhodi yentsimbi. Kukho i-Wi-Fi kunye nokwenzeka kweefowuni zasimahla ngaphakathi kwenethiwekhi yaseJamani.
Kukho nomatshini wokuhlamba owusebenzisayo.
Ngeentsuku zemozulu embi okanye ngorhatya olude kukho iiCD ezininzi, iiDVD (nokuba ezinye ngezinye iilwimi) imidlalo yebhodi neencwadi. Wamkelekile ukuba usebenzise yonke into engaphakathi kweflethi. Zive ngathi usekhaya!
Ngeentsuku ezinelanga, iindwendwe zinethuba (ngokuvumelana nomnini-mhlaba) lokuchitha i-BBQ yothando ngasechibini egadini.
Ukongeza, iibhayisekile ezimbini ziyafumaneka ngesicelo (simahla).
Kuyenzeka ukuba uze nezilwanyana zakho zasekhaya, kodwa ndingacela umrhumo / iindleko ezongezelelweyo. Nceda uqhagamshelane nam ngaphambi kokufika kwakho.
Ukufika kunye nokuhamba: Ukufika kunokwenzeka ukusuka kwi-14: 00 clock. Ukulungiselela iholide yeendwendwe ezilandelayo, ndingathanda ukucela ukushiya indlu kude kube yintsimbi ye-11:00. Ngeentsuku endingenazo ezinye iindwendwe, ixesha lokufika kunye nexesha lokuhamba lingavunyelwa ngabanye.
Ixabiso lenyanga: ngesicelo
Ndihlala kufutshane kwaye ukuba unemibuzo ungathandabuzi ukunditsalela umnxeba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Neubrandenburg